Kalfadhiga 6-aad ee baarlamanka Soomaaliya oo si rasmi ah loo furay (Saworro) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho: Madaxweynaha Soomaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada Muqdisho ka furey kalfadhiga 6 aad ee Baarlamaanka Soomaaliya, waxaana kulanka Barlamaanka ee maanta joogay Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali iyo gudoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan “Jawaari” oo kulanka shir gudoominayay.
Sidoo kale kulanka ayaa waxaa la qeybgalay gudoomiyaha Maxkamadda sare ee dalka Abuukaate Ceydiid C/laahi “Ilo-Xanaf”, Xeer ilaaliyaha guud,Hanti dhowraha qaranka iyo Wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya.
Ugu horeyntii ayaa waxaa goobta lagu dhaariyay labo Xildhibaan oo ka tirsan Baarlamaanka iyo Wasiiru dowlaha madaxtooyada mudane Mahad Maxamed Salaad, intaas ka dib waxaa la gudagalay khudbadihii kulanka ay mas’uuliyiinta ka jeediyeen.
Xildhibaanada la dhaariyay ayaa kala ah mudane Maxamed Cabdi Maxamed oo lagu bedeley marxuum Xildhibaan Cabdi Maxamed Cali iyo mudane Maxamed Cali Daheeye oo isna lagu bedelay marxuum Xildhibaan C/laahi Qayaad Barre.
Afhayeenka Baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan “Jawaari” ayaa Xildhibaanada golaha shacabka u sheegay in xilligan Baarlamaanka ay shaqo adag hortaalo isla markaana waqtiga u harsan uu aad u yaryahay loona baahan yahay in loo diyaar garoobo howshaasi.
Mudane Jawaari ayaa Ra’iisul wasaaraha dalka ka dalbaday in uu faah faahin ka bixiyo kulamadii madaxda Kenya uu dhowaan la soo yeeshay kuwaas oo ku saabsanaa arimaha dadka qaxootiga ah iyo Xawaaladaha dowladda Kenya ay ka joojisay shaqada.
Ra’iisulwasaare Cumar C/rashiid ayaa sheegay madaxda dalka Kenya ay isku afgarteen in qaxootiga Soomaaliyeed aan si qasab ah lagu celin karin dalkooda isagoo sidoo kale sheegay in dib u furida shirkadaha Xawaaladaha Soomaaliya ay kamid aheyd arimaha ay isla soo qaadeen mas’uuliyiinta dalka Kenya.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad dheer ka jeediyay furitaanka kalfadhiga 6 aad ee golaha shacabka ayaa ka hadlay arimo badan oo ay kamid tahay la dagaalanka Alshabaab, arimaha qaxootiga dalalka Kenya iyo Yeman oo Soomaali badan ay ku dhibaateysan yihiin.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar uu ka hadlayay arimaha federaalka waxaa uu meesha ka saaray in hanaanka goboleysiga uu yahay mid umadda kala qob qobeya isla markaana colaad abuuraya isagoo sheegay in dadka sidaa ka aaminsan federaalka aysan sax aheyn.
Madaxweynaha dalka ayaa Baarlamaanka ka codsaday in ay xooga saaraan shuruucda quseysa federaalka si maamulada KMG ah oo hadda dhisan iyo kuwa kale oo soo socoda ay u noqodaan kuwo buuxiya dhamaan shirciyada ku degsan dalka.
Ugu dameyntii Maaxweyne Xasan Sheekh ayaa ugu baaqay dhalinyarada ay khaldeen Alshabaab in ay dadkooda dib ugu soo laabtaan isla markaana dowlada Soomaaliya ay soo dhaweyn doonto.
Muqdisho: Dowladda oo bilowday iney dadka ka saarto xerooyinka ciidamada (Sawirro)